I-China 36W Germicidal UV light isibane sokubulala iintsholongwane ekhaya kunye noMthengisi | Kanfur
36W Germicidal uv light isibulali magciwane ekhaya
Ukukhanya okuyi-110V / 220V kwe-UV ukukhanya okuvela eKanfur makukhanyise ilanga egumbini, kunye nemisebenzi yokubulala iintsholongwane, ukubulala iintsholongwane kunye nokususa iintsholongwane, ikulethela indawo yokuhlala esempilweni.
1. Iiparamitha zesibane se-UV esibulala iintsholongwane
Qaphela: 110V / 220V
Umbane: 36W / 60W
Izinto zetyhubhu: Isibane seQuartz se-UV
Ubomi benkonzo: iiyure ezingama-8000
Umsebenzi: Ixesha elinezixhobo ezintathu (15min, 30min, 60min), ukulibaziseka kokuqalisa kunye nolawulo olukude olungenazingcingo.
Imigangatho yePlagi: imigangatho yesizwe, iMigangatho yaseMelika (isatifikethi se-UL), imigangatho yaseYurophu.
Ubukhulu: 14 * 14 * 44 (CM)
2.Yintoni itekhnoloji ye-UV?
Ukukhanya kwe-Ultra-Violet (UV) akubonakali kwiliso lomntu kwaye kwahlulwe kwaba yi-UV-A, UV-B kunye ne-UV-C.
I-UV-C ifumaneka ngaphakathi kwe-100-280 nm. Kwigrafu kunokubonwa ukuba isenzo sokubulala iintsholongwane sandisiwe kwi-265 nm ngokunciphisa kwelinye icala. Uxinzelelo oluphantsi lwezibane ze-UV-C zinokukhutshwa kwazo okukuko kwi-254 nm apho isenzo kwiDNA siyi-85% yexabiso eliphakamileyo kunye ne-80% kwigophe le-IES. Ngenxa yoko, izibane zethu zokubulala iintsholongwane zisebenza ngokubalaseleyo ekwaphuleni i-DNA yezinto ezincinci. Oku kuthetha ukuba abanako ukuziphindaphinda kwaye babangele izifo4.
Izinto ezincinci ezisebenza ngokuchasene nokukhanya kwe-UV ziyahluka kakhulu. Ngapha koko, imeko-bume yendawo ethile encinci inefuthe elikhulu kwidosi yemitha efunekayo ekutshatyalalisweni kwayo.
3.Zithini izibonelelo zeLampicidal UV-C Lamp?
I-ozone kunye ne-ozone yasimahla, inikwe amandla okude
Ukukhanya kweGermicidal UVC kungasebenzi kwiintsholongwane kwaye kuhlambulula umoya. Ukukhanya kwethu kwe-UVC kwakhona izibane ezininzi ze-UVC zikwakhupha ne-ozone, inokuqonda inzalo ejikeleze yonke indawo
Isibane se-UVC sikwaza nesilawuli esingenazingcingo sokwenza lula ukusetyenziswa kunye nokhuseleko.
Umsebenzi wesandla uyazikhethela. Ngokucofa nje iqhosha, ngaphezulu kwe-Apollo okanye kumgama okhuselekileyo kude- iintsholongwane, iintsholongwane, kunye neentsholongwane azisebenzi.
Cofa nje iqhosha lamandla okanye usebenzise iremote kumgama okhuselekileyo kwaye ukukhanya kweGermicidal UVC kuqala ukuphazamisa i-DNA kunye neRNA yezifo kwaye balahlekelwe bubungqabavu kunye nokusebenza. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kufana nomlingo.
Egqithileyo I-36W ephathekayo 254nm iOzone UVC isibane sokubulala iintsholongwane
Okulandelayo: Uyilo olutsha lwe-35W UV ukukhanya kwe-disinfection ukukhanya kwenzalo yangaphakathi
i-UV ephathekayo yokukhanya kwenzalo
isibane se-UV esiphathwayo
isibane sokubulala iintsholongwane
UV isibane seentsholongwane ekhaya
UV izibhedlele isibulala-zintsholongwane
ukukhanya kwe-UV yelanga
isibane esibulala iintsholongwane kwigumbi lokubulala iintsholongwane egumbini
I-36W ephathekayo 254nm iOzone UVC isibane sokubulala iintsholongwane
36W / 60W UV isibane kweentsholongwane kunye wifi Susa ...
Isibhedlele esiphathwayo i-ultraviolet disinfec ...